NRK: Ogow wax walba oo la xiriira viruska Corona iyo Norway. - NorSom News
NRK: Ogow wax walba oo la xiriira viruska Corona iyo Norway.
TV-ga qaranka Norway ee NRK ayaa luuqado kala duwan ku diyaariyay macluumaad la xiriira caabuqa Covid-19 iyo saameynta uu ku yeeshay Norway. Sidoo kale amarada dowlada, waxyaabaha la mamnuucay iyo sida looga hortagi karo.
Halkan ka akkhri warbixinta af soomaaliga ah ee NRK.
Previous articleDenmark: Waxaan joojinay celinta dadka qoxootiga ah ee xeerk “Dublin”.
Next articleOslo: Booliska oo gudaha u galay maqaaxiyo shaaxa ee soomaalida.